China Ihhavini laseDashi eliphilile linekhono lokupheka elihle kakhulu Ukwakha kanye nefektri | ISANXIA
Incazelo:Φ250 * 120mm
Ukwakhiwa kwensimbi okuqinile, le mbiza isabalalisa ukushisa ngokulinganayo kusuka phansi kuye ezindongeni eziseceleni. Iyakwazi ukugcina ukushisa kangcono ngakho-ke ukudla kwakho kuhlala kufudumele isikhathi eside. Ungapheka nayo ngayo ekhishini lakho noma ngaphandle endle.
Ukusebenza okuphezulu kokupheka
Indawo enganamatheli iza ngaphandle kwamakhemikhali ayingozi ngakho-ke kuphephe ngo-100% ngayo. Ukuma kwesilinda nezindonga eziseceleni ezijiyile kwenza kuhambisane nazo zonke izipheki. Iyakwazi ukushisa ngokulinganayo futhi igcine ukushisa kangcono
Yakhiwe ngensimbi yensimbi futhi icutshungulwa ngobuchwepheshe bokugcina obumnandi, leli oveni laseDashi elijulile liqinile ngokwanele ukumelana nemvelo engaphandle ngokweqile. okukuvumela ukuthi ujabulele ukudla okuthosiwe ngisho nasekhempini. Ijazi likawoyela wezitshalo elingenamakhemikhali liletha okungeyona induku usebenzisa okuhlangenwe nakho, ukuvikela impilo yakho ngaphandle kokuyekethisa.
Imininingwane design imikhiqizo
isivalo sesitsha esijulile sandisa ukugeleza komoya ngisho nokupheka; isibambo esikahle sesivalo senza le mbiza kube lula ukuyiphatha. Zonke-round Oven Dutch. Imilenze ebalulekile ebhodweni nasesembozweni ivumela ihhavini ukuthi lihlale kahle phezu komlilo wekamu; isivalo singasetshenziswa futhi njenge-skillet yokuthosa.
Waziwa njengeMboni Yesikhathi Sokuphila. Uma kuqhathaniswa nezimbiza zezinye izinto, i-Oven yaseDashi yenziwe ngensimbi esezingeni eliphakeme, futhi izohlala impilo yonke uma inakekelwa kahle. Ingasetshenziswa zombili eziko nasehhavini ekhaya, inikeze inani lemali.
Ukonga amandla futhi kulungele imvelo. Ukushisa kusatshalaliswa ngokulinganayo futhi kuyabanjelwa, kukwenza kube kuhle ukuthosa okujulile, ukubhaka nokubhaka. Ibuye inezinzuzo zokufakwa okukhulu kokushisa kanye nophawu oluhle, ngakho-ke ngisho ne-novice camper ingenza inkukhu eyosiwe emnandi ngale mbiza.
Uma usuqedile ukupheka, ukuhlanza nangemva kokunakekelwa kulula. Qiniseka ukuthi uyomisa imbiza ngokuphelele ngemuva kokuyihlanza kanti ibhodwe lisashisa, kancane uwoyela ngaphakathi kwepani ngamafutha akho akhethiwe, ijazi elincanyana yilokho okudingayo. Sebenzisa ithawula lendwangu noma lephepha ukuze uhlikihle noma ikuphi okweqile.
Langaphambilini I-pan yensimbi yensimbi enesibambo sokhuni esisodwa akulula ukunamathela ngaphandle kokumboza
Olandelayo: Ama-double iron iron cast iron skillets awina umklomelo wamachashazi abomvu waseJalimane
eqanjwe i-Cast Iron Skillets, uNamel Skillet, i-Iron Iron Skillet engathinti, I-Iron Iron Skillet, i-Cast Iron Skillet enamanzi, I-xtreme Iron Skillet,